မင်္ဂလာပါ: February 2009
Posted by SI THU at 8:00 a.m. No comments:
အမျိုးသား - အင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း အကြာကြီးစောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်
အမျိုးသမီး - ဟင်းနော်....ထားသွားလိုက်ရမလား?
အမျိုးသား - အမယ်လေး စိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်လိုက်ပါနဲ့
အမျိုးသမီး - တကယ် ချစ်ရဲ့ လားဟင်?
အမျိုးသား - ဒါပေါ့ ဒီထက်တောင်ပိုသေးတယ်
အမျိုးသမီး - ကျွန်မကို အရူးလုပ်မှာလား
အမျိုးသား - ဘုရားစူးရစေရဲ့  ဒီမေးခွန်းမျိုး မေးတောင်မမေးပါနဲ့လား
အမျိုးသမီး - ကျွန်မကို နမ်းချင်သလား ဟင်?
အမျိုးသား - အချိန်မရွေးပဲ
အမျိုးသမီး - နှိပ် ကော နှိပ်စက်မှာလား?
အမျိုးသား - မင်းရူးများရူးနေလားကွာ
အမျိုးသမီး - ကျွန်မ မောင့်ကို စိတ်ချရပါတယ်နော်?
အမျိုးသား - အင်း
အမျိုးသမီး - မောင်ရယ်...
အပေါ်က စကားလေးတွေကို အောက်ဆုံးကနေအပေါ်ကိုသာ ပြောင်းပြန်ဖတ်လိုက်ပါ
Posted by SI THU at 9:07 a.m. No comments:
ဟိုဘက်ခြံက ကြက်ဖနဲ့ ကျုပ်ကြက်မနဲ့ညား သူတို့ချစ်ခြင်းရဲ့အချစ်သက်သေ အိမ်မှာ ဥတစ်လုံးကျ
ဟိုဘက်ခြံကအကောင် ပုကွကွ စကားပြော ဘုကျကျ ကျုပ်ခြံထဲကဥကို လာပြီး မ
ငါ့ခြံထဲမှာဥတဲ့ဥ ငါ့ကြက်မရဲ့ဥ အတင်းဝင်ကောက်တဲ့ ဟိုဘက်ကဂျပု မလွန်ခင် တူနဲ့ထု
မင်းကြက်အထီးက မဥတဲ့ဘ၀.. အဲ့ဒါ မင်းကိတ်စ.. မင်းမကျေနပ်ရင် ကိုယ်တိုင်ထိုင်ဥဟ..
အဲဒီမှာစ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲကြ.. အမျိုးတွေကလေးတွေ ဂျပုကို ၀င်ပြီးချ. မုတ်ဆိတ်ကိုဆွဲ..
ဒူးနှစ်လုံးကြားထည့် သူ့ကျောကိုထုတာ လက်တောင် မလည်ဘူးတဲ့..
နှုတ်ခမ်းတွေကွဲလို့ ခေါင်းလည်းဖု အညှိုးထားသွားတဲ့ဂျပု..
ဥကိုမရတော့ ကျုပ်ကြက်မ သန်းခေါင်မှာ ဂွနဲ့ထု.. ကြက်မကြီး မာလကီးယားလို့
သူ့နွားကြီး မှိန်းနဲ့ထိုး နွားသေသွားလို့ သူကြီးတိုင်တော့ အကြောင်းဆိုး...
အသက်ခြောက်ဆယ်မှ ထိပ်တုံးနဲ့ညား ဒေါကန်ရတာ ပြောစရာမရှိဘူးခင်ဗျ..
ဂျပုဘက်ကအမျိုး.. ကျုပ်ဘက်ကအမျိုး လမ်းမှာတွေ့ရင် ဦးရာလူကချ..
နေတက်ရေတက်မှာ မွေးတဲ့ကျုပ် စိတ်ထားက ခပ်ပုပ်ပုပ်..
လူပါးဝလွန်းတဲ့ ဂျပုမျက်ခွက် မျက်စိထဲကမထွက် သူ့စပါးကျီထဲကို မီးအိမ်သွားပစ်ထည့်..
အဲဒီမှာစ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲကြ.. အမျိုးတွေ ကလေးတွေ လွတ်ရာကိုပြေးဟ..
ဂျပုရဲ့အိမ်ထက် Fire ကကဲ.. သိပ်မကြာသေးခင် ကျုပ်အိမ်ပါ မီးစွဲ..
ကျုပ်တစ်ရွာလုံးက ၀ိုင်းငြိမ်းရ.. ကျုပ်ရှို့တဲ့မီးခင်ဗျ.. ကြက်ဥတစ်လုံးကစတဲ့အစ..
နှစ်အိမ်ထောင် ပြာဖြစ်ကြ.. သင်ခန်းစာရလို့ ပုခုံးထဖက်.. ဂျပုက ရှုံ့မဲ့မဲ့.
နောက်တစ်ခါ ကြက်တွေ မဥအောင် လုပ်ထားကွာ..
Posted by SI THU at 8:40 a.m. No comments:
ကျုပ်ရင်အစုံ ၊ အသည်းအုံကို
ဆွဲကြုံယူလှစ် ၊ တအားချစ်ရ
ကွေးကွေးကောက်ကောက် ၊ မာမီး(mame)ခြောက်သို့
မဖြောင့်မစင်း ၊ ကေသာဆင်းက
အရင်းအဖျား ၊ တစ်ထွာများတောင် ရှိသဗျ ။
နေ၀င်ရီရော ၊ ညစောစော၌
အကြောမသိ ၊ သူ့အားကြည့်လျှင်
အတိမှောင်ဆင်း ၊ ညီမျှခြင်းကား
သွေးကြောစိမ်းမြ ၊ ကြည့်ချင်ပ ဆို
မိုက်ခရိုစကုပ် ၊ မျက်မှောင်ကျုတ်၍
အဟုတ်ကြည့်မှ ၊ ရေးရေးပြမည်
ဤသည် သူ့အရေအဆင်း ။
သုံးဆယ့်နှစ်ချောင်း ၊ မပြည့်ကောင်းဟု
ဆုတောင်းထားလား ၊ ထင်ရမှားအောင်
သူ့သွားများကား ၊ ဥသျှစ်သီးစား ရင်
ရှိရင်းအသက် ၊ နှစ်ဆထပ်တင်
အတပ်မြှောက်ညား ၊ ငယ်တောင်သွားမည်
သူကားထို့ထက် ၊ ပိုရင့်ကျက်၏ ။
ဆံပင်၊ အသား ၊ ရိုး ၊ ရေ များနဲ့
ရွယ်အားသိပ်ကောင်း ၊ သက်လျာလောင်းမို့
စိတ်ကောင်းကောင်း မချဘူးဗျာ ။ ။
Posted by SI THU at 2:45 p.m. No comments:
လင်ဆေးလိုဟန် က ကျုပ်အသည်း ။
ကင်ထယ်ဟီး က ကျုပ်အသက် ။
စိန်လာမခေါ်ရင် တော့ ၊
ကီရာနိုက်တလေ ကိုချစ်တယ် ။
လီယောင်အေး လည်း ချစ်တာပဲ ။
သဉ္ဖာဝင့်ကျော် လေး ။
ကိတ်ဝင်းစလက် ကိုလည်း မမေ့ဘူး ။
ဂျင်ဂျီဟွန်း အချစ်ပါ ။
သက်မွန်မြင့် လည်း ရရင်ယူမှာ ။
ဂျိုးဂျိုး လေးကိုလည်း ချစ်တယ်ဗျာ ။
ဂျပန် ယူရီ ကိုလည်းသွင်းထားတယ် ။
L ဆိုင်းဇီ လည်းယူမှာပဲ ။
တစ်ဒါဇင်ကျော်ရင် ၊ လာဝင်ဆော်မယ့်
ညီတော်နောင်ဘွား ၊ ကာလသားများကို
အရမ်းအားနာ ၊ သနားတာကြောင့်
ဒီဟာလေးပဲ ၊ တော်သေးပြီ…… အဟေးဟေး ။ ။
Posted by SI THU at 2:43 p.m. No comments:
မအိပ်သေးခင် ၊ ဘုရားရှင်ကို
ဦးတင်ရိုကျိုး ၊ လက်အုပ်မိုးလို့
သြကာသ စ ၊ တရားအဆုံး
စင်္ကြာလုံးကို ၊ မေတ္တာတုံးတွေ
အရှေ့ အရပ် ၊ နေထိုင်အပ်သော
သတ္တ၀ါများ ၊ စိတ်မှာထားစဉ်
ဟဲ့ … ဘာဖြစ်တာတုန်း… ? ။
ညာဘက်တင်ပါး ၊ နောက်အနားက
ဘာများနှောင့်ယှက် ၊ အပူတက်လဲ
တစ်ချက် ချက် ( check ) မယ်….။
ဦးခေါင်းကိုငိုက် ၊ တင်ကို ဟိုက် ( high ) လို့
မိုက်မိုက် ကန်းကန်း ၊ သွေးတိုးစမ်းတယ်
မော်စကွစ်တို ( mosquito ) ၊ မှောင်ရိပ်ခိုပြီး
ကျုပ်ကို တကယ် ၊ အဟုတ်တွယ်ပြီ
ဒီလို ရ ကြေး လား…ကွ ။
မိုးမှာသိကြား ၊ ဗိုလ် မထားဘူး
ကျုပ်အားစော်ကား ၊ သကောင့်သားအား
ဆုံးမထားမှ တော် ချိမ့် မည် ။
ညာလက်ဖ၀ါး ၊ ဦးချထားလည်း
မဟားဒယား ၊ ဒင်းစော်ကားလို့
လာထားစမ်းကွ …… ဖြန်း ။
အဟမ်း အဟမ်း ၊ ဆက်ပို့စမ်းမယ်
ဝေဖြန်းမေတ္တာ ၊ ဒီ ၀ဠာက
သတ္တ၀ါ အပေါင်း ကျန်းမာကြပါစေ….။ ။
Posted by SI THU at 2:39 p.m. No comments:
လွန်ကဲစွာ အကြင်နာ ပေးခြင်းကြောင့် အကြား အာရုံ ပျက်စီးနိုင်
တရုတ်နိုင်ငံ Guangdong ပြည်နယ်မှ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသည် ဘယ်ဘက်နားလုံးဝမကြားရတော့
သဖြင့် ဆေးရုံတွင် လာရောက် ကုသမှုခံယူကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ ထို အမျိုးသမီးငယ်အား ကုသပေး
သည့် ဆရာဝန်က - အကြင်နာပေးခြင်းကြောင့် ပါးစပ်တွင်းလေဖိအား လျော့ကျပြီး နားစည်အား အတွင်းသို့စုပ်ဆွဲ
သကဲ့သို့ ဖြစ်စေသဖြင့် နားစည်ပျက်စီး၍ အကြားအာရုံချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အလွန်အကျွံ နမ်းခြင်း
သည် အတွင်းနားနှစ်ဖက်ကြား လေဖိအားကို မမျှမတဖြစ်စေပြီးနားစည်ပေါက်သွားတတ်သည်။ထိုအမျိုးသမီးငယ်
သည် ပုံမှန်အကြား အာရုံပြန်လည်ရရှိရန် အချိန်နှစ်လ ယူရမည်ဖြစ်သည်။ နမ်းခြင်းသည် သာမန်အားဖြင့် ဘေး
အန္တရာယ်မဖြစ်သော်လည်း သတိထားသင့်ပေသည်ဟု ဆရာဝန်များက အကြံပြုထားသည်။
Posted by SI THU at 2:20 p.m. No comments:
Posted by SI THU at 7:54 p.m. 1 comment: